Isehlukaniso ngezinyathelo eziyi-10 | Law & More B.V. | Eindhoven, Amsterdam
Blog » Isehlukaniso ngezinyathelo eziyi-10
Isehlukaniso ngezinyathelo eziyi-10
Kunzima ukunquma ukuthi uyathola yini isehlukaniso. Lapho usuthathe isinqumo sokuthi lesi yisixazululo kuphela, inqubo iqala ngempela. Izinto eziningi zidinga ukuhlelwa futhi kuzoba yisikhathi esinzima ngokomzwelo. Ukukusiza lapho usendleleni, sizonikeza ukubuka konke ngezinyathelo okufanele uzenze ngesikhathi sehlukaniso.
Isinyathelo 1: Isaziso sesehlukaniso
Kubalulekile ukuthi uqale utshele umlingani wakho ukuthi ufuna isehlukaniso. Lesi saziso sivame ukubizwa nangokuthi isaziso sesehlukaniso. Kuwukuhlakanipha ukunikeza lesi saziso kumlingani wakho mathupha. Kungaba nzima kanjani, kuhle ukukhuluma ngakho nomunye. Ngale ndlela ungachaza ukuthi kungani uze kulesi sinqumo. Zama ukungasoli omunye komunye. Kuyisinqumo esilukhuni nobabili namanje futhi. Kubalulekile ukuthi uzame ukugcina ukuxhumana okuhle. Ngaphezu kwalokho, kuhle ukugwema izingxabano. Ngale ndlela, ungavimbela isehlukaniso sakho ekubeni yimpi yesehlukaniso.
Uma nikwazi ukukhulumisana kahle, ningehlukanisa futhi. Kubalulekile ukuthi uqashe ummeli ozokuqondisa kulesi sikhathi. Uma ukuxhumana nomlingani wakho kukuhle, ningasebenzisa ummeli oyedwa ndawonye. Uma kungenjalo, iqembu ngalinye kuzofanele liqashe ummeli walo.
Isinyathelo 2: Ukushayela ummeli / umlamuli
Isehlukaniso simenyezelwa yijaji futhi ngabameli kuphela abangafaka isicelo sesehlukaniso enkantolo. Ukuthi kufanele ukhethe ummeli noma umlamuli kuya ngendlela ofuna ukuhlukanisa ngayo. Ekulamuleni, ukhetha ukuphelezelwa ngummeli / nomlamuli oyedwa. Uma wena nomlingani wakho ngamunye nisebenzisa ummeli wakho, nizoba sezinhlangothini eziphambene zenqubo. Uma kunjalo, ukuqhubeka kwenqubo kuzothatha isikhathi eside futhi kuzobiza izindleko eziningi.
Isinyathelo 3: Idatha ebalulekile nemibhalo
Okwahlukanisa, imininingwane eminingi ephathelene nawe, umlingani wakho nezingane ibalulekile. Isibonelo, isitifiketi somshado, izitifiketi zokuzalwa zezingane, ukukhishwa kwe-BRP kumasipala, okukhishwe kwirejista yokugcinwa komthetho ngokusemthethweni kanye nanoma iziphi izivumelwano zangaphambi komshado. Le yimininingwane yomuntu siqu ebaluleke kakhulu nemibhalo edingekayo ukuqala izinqubo zesehlukaniso. Uma esimweni sakho esithile kudingeka imibhalo eminingi noma imininingwane, ummeli wakho uzokwazisa.
Isinyathelo 4: Izimpahla nezikweletu
Kubalulekile ukuthi ubeke ebalazweni yonke impahla nezikweletu zakho kanye nomlingani wakho ngesikhathi sesehlukaniso bese uqoqa amadokhumende asekelayo. Isibonelo, ungacabanga ngetayitela letayitela lendlu yakho kanye netayitela lobambiso le-notarial. Imibhalo elandelayo yezezimali nayo ingabaluleka: izinqubomgomo zomshwalense wezimali ezinkulu, izinqubomgomo zempesheni, ukutshalwa kwezimali, izitatimende zasebhange (kusuka kuma-akhawundi okulondolozwa nakuma-akhawunti asebhange) kanye nembuyiselo yentela yemali engenayo yeminyaka edlule. Ngaphezu kwalokho, uhlu lwemiphumela yasendlini kufanele luhlelwe lapho ukhombisa khona ukuthi ngubani ozothola ini.
Isinyathelo 5: Ukwesekwa kwengane / ukwesekwa kozakwethu
Ngokuya ngesimo sakho sezezimali, ukwesekwa kwengane noma owakwakho kuzodingeka ukuthi kukhokhwe futhi. Ukuze unqume lokhu, idatha yemali engenayo kanye nezindleko ezihleliwe zazo zombili izinhlangothi kumele zibuyekezwe. Ngokuya ngale mininingwane, ummeli / umlamuli wakho angenza ukubalwa kwe-alimony.
Isinyathelo 6: Impesheni
Idivosi nayo ingaba nemiphumela ngempesheni yakho. Ukuze ukwazi ukunquma lokho, kudingeka imibhalo ekhombisa wonke amalungelo empesheni atholwe nguwe nomlingani wakho. Ngemuva kwalokho, wena nozakwenu (ex) ningenza amalungiselelo maqondana nokwehlukaniswa kwempesheni. Isibonelo, ungakhetha phakathi kokulingana ngokomthetho noma indlela yokuguqula. Isikhwama sakho sempesheni singakusiza wenze ukhetho olufanele.
Isinyathelo 7: Uhlelo lokuba ngumzali
Uma wena nozakwenu (ex) naye unezingane, unesibopho sokwenza uhlelo lokuba ngumzali ndawonye. Lolu hlelo lokuba ngumzali luhanjiswa enkantolo kanye nesicelo sesehlukaniso. Kulolu hlelo nizobeka izivumelwano ndawonye mayelana:
Indlela ohlukanisa ngayo imisebenzi yokunakekela nokuba ngumzali;
indlela enazisa futhi nibonisane ngayo ngemicimbi ebalulekile yezingane nangezimpahla zezingane ezisencane;
izindleko zokunakekelwa nokukhuliswa kwezingane ezincane.
Kubalulekile ukuthi izingane nazo zibambe iqhaza ekwakheni uhlelo lokuba ngumzali. Ummeli wakho angakudalela uhlelo lokukhulisa izingane kanye nawe. Ngaleyo ndlela ungaqiniseka ukuthi uhlelo lokuba ngumzali luhlangabezana nazo zonke izidingo zenkantolo.
Isinyathelo 8: Ukufaka isicelo
Lapho zonke izivumelwano sezenziwe, ummeli ohlanganyele naye noma ummeli womlingani wakho bazolungisa isicelo sesehlukaniso bese besifaka enkantolo. Esehlukanisweni esisodwa, omunye umuntu uzonikezwa isikhathi sokubeka udaba lwabo bese kuhlelwa ukulalelwa kwenkantolo. Uma ukhethe ukwahlukanisa ngokuhlanganyela, ummeli wakho uzofaka isicelo futhi, ezimweni eziningi, isikhathi senkantolo ngeke sidingeke.
Isinyathelo 9: Izinqubo zomlomo
Ngesikhathi sokuqhubeka komlomo, amaqembu kufanele avele kanye nommeli wawo. Ngesikhathi sokulalelwa ngomlomo, amaqembu anikezwa ithuba lokuxoxa indaba yawo. Ijaji nalo lizothola ithuba lokubuza imibuzo. Uma ijaji linombono wokuthi linolwazi olwanele, lizokuqeda ukulalelwa bese likhombisa ukuthi lizothatha isinqumo ngasiphi isikhathi.
Isinyathelo 10: Isinqumo sesehlukaniso
Lapho ijaji selimemezele isinqumo sesehlukaniso, ungafaka isikhalazo kungakapheli izinyanga ezintathu zesinqumo uma ungavumelani nesinqumo. Ngemuva kwezinyanga ezintathu isinqumo asibuyiseki futhi isehlukaniso singabhaliswa kwirejista yombuso. Kungaleso sikhathi kuphela lapho okokugcina isehlukaniso. Uma ungafisi ukulinda isikhathi esiyizinyanga ezintathu, wena nomlingani wakho ningasayina itayitela lokuvuma ukuthi ummeli wakho uzolibhala. Lo mbhalo ukhombisa ukuthi uyavumelana nesinqumo sesehlukaniso nokuthi ngeke usidlulise isicelo sakho. Akudingeki ukuthi ulinde isikhathi sezinyanga ezintathu futhi ungabhalisa ngokushesha isimemezelo sesehlukaniso ku-Civil Registry.
Ngabe udinga usizo ngesahlukaniso sakho noma unemibuzo mayelana nezinqubo zesehlukaniso? Bese uthinte ochwepheshe abameli bezomndeni at Law & More. Kuzo Law & More, siyaqonda ukuthi isehlukaniso nemicimbi elandelayo ingaba nomthelela omkhulu empilweni yakho. Kungakho sithatha indlela yomuntu siqu. Abameli bethu nabo bangakusiza kunoma iyiphi inqubo. Abameli ku Law & More bangongoti emkhakheni wezomthetho womuntu siqu nowomndeni futhi bazokujabulela ukukuqondisa, mhlawumbe kanye nomlingani wakho, ngenqubo yesehlukaniso.
Thumela Previous Ukufaka isicelo semvume yokusebenza eNetherlands. Yilokhu wena njengesakhamuzi sase-UK odinga ukukwazi.
Post Next Ukuqashwa kokuqasha